MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardGifting Service (ပို႔ဘီ) - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
“ပို့ဘီ” သည် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်း MPT ဝန်ဆောင်မှု(Package)များကို လက်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ MPT ဝန်ဆောင်မှု(Package)များကို လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
A Kyite Pyaw+ Voice Pack
“ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမှာပါလဲ။
သုံးစွဲသူများသည် ပုံမှန်အတိုင်း USSD Code များကို ရိုက်နှိပ်ကာ မိမိနှစ်သက်ရာ Package ကိုရွေးပြီး “လက်ဆောင်ပေးမည်” နေရာကိုရွေးချယ်ကာ မိမိပေးပို့လိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်သွင်းလိုက်ရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာ လက်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်
MPT 4U app ကို အသုံးပြုပြီးလည်း လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Data Carry Plus Pack လက်ဆောင်ပေးရန်, *777#ကိုခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ရွေးပါ။ ညွှန်ကြားအချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။
A Kyite Pyaw+ Voice Pack Voice Pack လက်ဆောင်ပေးရန်, *600#ကိုခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ရွေးပါ။ ညွှန်ကြားအချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။
ထောဘီ ဖုန်းဘေလ် လက်ဆောင်ပေးရန်, *500#ကိုခေါ်ဆိုပြီး ဖုန်းဘေလ်ရွေးပါ။ ညွှန်ကြားအချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။
MPT Gifting Service “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှု
“ပို့ဘီ” သည် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်း MPT ဝန်ဆောင်မှု(Package)များကို လက်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ MPT သုံးစွဲသူများသည် “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး Data Carry Plus Pack၊ ပြောပီးရင်းပြော Voice Pack၊ ထောဘီ တို့ိကို အခြားMPTဖုန်းများသို့ လက်ဆောင်ပေးပို့ နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ခံရရှိသူသည် မိမိလက်ခံရရှိသော Package ကို ယင်းPackage၏ လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
2. “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးတဲ့အခါဝန်ဆောင်ခ ပေးစရာလိုပါသလား။
3. ကျွန်တော့်မှာ လက်ကျန်Data Carry Plus Pack ရှိနေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဆီကနေ Data Carry Plus Pack အသစ်တစ်ခုကိုလည်းလက်ခံရရှိပါတယ်။ ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။